धानको बिरुवामा कीराको प्रकोप
धान बाली सुक्दा कृषक चिन्तित प्रस, वीरगंज, १६ जेठ/ पर्सा जिल्लाको परसोतीपुर, बेलवा गाविसको क्षेत्रमा धानको बिरुवा मर्ने रोग फैलिएको छ। पसाउन लागेको धानको गाभामा कीराले काट्ने र धानको पात सेतो खैरो हुने गरेको छ। यसरी मर्न सुरु भएका धानबिरुवा खेतमा हरियो रङको घस्रिएर हिंड्ने स-साना कीरा देखिएको परसोतीपुरका कृषक लालबहादुर यादवले जानकारी दिएका छन्। विशेषगरी चैते फिलिप्स र १४४२ जातको धानमा पत्ता सुक्ने रोग देखापरेको सोही स्थानका अर्का धान कृषक मनोज यादवले बताएका छन्। परसोतीपुर, लालपर्सा र बेलाका विभिन्न वडाहरू गरी करिब एक सय हेक्टरभन्दा बढी धान खेतमा पत्ता सुख्ने रोग देखिएको छ। सो सम्बन्धमा क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान कार्यालय, परवानीपुरका प्रमुख कैलाश भुरेलले रोगबारे जानकारी नआएको बताए। स्थलगत निरीक्षणपश्चात् रोगको निराकरण हुन सक्ने भएकोले सो क्षेत्रमा एकाइमार्फ् समयमैं निरीक्षण गराउनुपर्ने बताएका छन्।
मोबाइल पड्केर छात्रको मृत्यु
भीमफेदी, १६ जेठ/रासस मोबाइल सेट चार्ज गर्न लाग्दा सेट पड्केर करेन्ट लागी एक किशोरको आज हेटौंडा अस्पतालमा ल्याउंदा-ल्याउंदै बाटोमा मृत्यु भएको छ। मृतक मकवानपुर जिल्ला हांडीखोला गाविस-७ निवासी १६ वर्षयसुजन तिवारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मकवानपुरले जनाएको छ। तिवारी स्थानीय महेन्द्र किरण मावि हांडीखोलाका कक्षा ७ मा अध्ययनरत छात्र रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
डाक्टर नहुंदा बिरामी आउन छाडे
-जीतलाल श्रेष्ठ- निजगढ-९ मा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना हुंदा निकै हषिर्त भएका छिमेकी जिल्ला रौतहट र मकवानपुरका ग्रामीणबस्तीका बासिन्दा स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टर नहुंदा बिरामीको उपचार गराउन अन्यत्र जान बाध्य छन्। करिब डेढ दशकपहिले स्थापित उक्त स्वास्थ्य केन्द्रमा लगभग ९ महिनादेखि डाक्टर छैन। २०६३ पुसमा केन्द्रमा दरबन्दी पाएका डाक्टर राजदेव कुशवाहा सरकारी कोटामा अध्ययनका लागि बिदा लिएर गएका थिए। उनको अध्ययन सकिए पनि स्वास्थ्य केन्द्रमा नफर्किएपछि यो स्वास्थ्य केन्द्र डाक्टरविहीन हुन पुगेको हो। पछि केन्द्रमा विजयकुमार जयसवाललाई करारमा भर्ना गरियो । करिब ३ महिना काम गरी उनी नियुक्ति लिएर कलैया गए। सुरुमा स्वास्थ्य केन्द्रमा दैनिक ३५ देखि १ सयसम्म बिरामीहरू आउने गरेका थिए तर डाक्टर नै नभएपछि रुघा, खोकीलगायत साधारण बिरामी मात्र दैनिक १० देखि १५ जना आउने गरेका केन्द्रको अनमी सोना शर्माले बताइन्। अस्पताल दिनभरि खुला हुन्छ तर बिरामी आउंदैनन्, डाक्टर नभएकै कारण बिरामी नआएको केन्द्रका ल्याब असिस्टेन्ट सुमन चौधरीले भने प्रस्ट पारे। केन्द्रको झन्डै १६ कठ्ठा क्षेत्रफलमा ४ वट
जनज्योतिमा फूटबल प्रतियोगिता
प्रस, हेटौडा, १६ जेठ/ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जनज्योति मावि चुरियामाई मयुरधापमा कक्षास्तरीय फूटबल प्रतियोगिता भएको छ। कक्षा ९ को आयोजना तथा विद्यालयको व्यवस्थापनमा भएको प्रतियोगिताको फाइनल खेल आइतवार कक्षा १० ले जितेको छ। कक्षा ८ लाई ७-० को फराकिलो गोल अन्तरले कक्षा १०ले खेल जितेको हो। प्रतियोगितामा कक्षा ९ तेस्रो भएको छ। समापन तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा सहायक प्रधानाध्यापक सुदीप पौड्यालले पुरस्कार वितरण गरेका थिए। आयोजक कक्षा ९ का अञ्जन सापकोटाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सहायक प्रधानाध्यापक पौड्याल र खेल शिक्षक रामहरि चौलागाईंले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए। उत्कृष्ट खेलाडी, सबैभन्दा बढी गोलकर्तालाई पुरस्कृत गरिएको खेल शिक्षक चौलागाईंले बताए।
कामकाजी आमा र बालबालिकाको भविष्य
-अनन्तकुमार लाल दास र् वर्तमान पर्रि्रेक्ष्यमा बढ्दो आवश्यकता र आर्थिक स्रोतको कमीले गर्दा परिवारलाई धान्न परिवारका हरेक सदस्यलाई आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी हुने परिवेश सृजना हुंदै गएको छ। जस अनुसार महिलाहरूले समेत विभिन्न स्वरूपका जागिरमा आफनो उपस्थिति देखाइरहेका छन्। हुंदाहुंदा कतिपय महिलाका लागि यो पारिवारिक आवश्यकताभन्दा व्यक्तिगत प्रतिष्ठा एवं फेसनको रूपमा प्रतिष्ठापित हुंदै गएको छ। हाम्रो सर्न्दर्भमा पनि वैश्विक सामाजिक दृष्टिकोणमा परिवर्तनले गर्दा हरेक क्षेत्रमा महिला प्रतिनिधित्व र सहभागिता बढ्दै गएको छ। एकातिर आर्थिक क्षेत्रमा सहभागिताले गर्दा उनीहरूको जीवनस्तर उकासिंदै गएको छ भने अर्कोतिर उनीहरूको घरायसी उपस्थिति कम हुन जांदा विद्यार्थीहरूको भविष्य र चौतर्फी विकासका लागि चाहिने मातृत्व, स्नेह, भावनात्मक सम्बन्ध, आमा द्वारा दिइने प्रशिक्षण, सरसल्लाह र निर्देशनका साथै घरायसी सम्बन्धका महत्त्वपर्ूण्ा पक्षहरू धराशायी हुंदै गएका छन्। परिणामस्वरूप कामकाजी महिला भएको परिवारका बालबालिकाहरूको भविष्य अन्योलग्रस्त हुन पुगेको पाइएको छ। एक कथा अनुसार एक व्यक्तिको घरमा आगलागी
जनता मात्र ठगियो
जेठ १४ गतेको जुन रडांको मच्याइएको थियो, त्यो शान्त भइसकेको छ। नेपाली जनताको साढे तेर्‍ह अर्ब रुपियां सिध्याएर थप सात अर्ब सिध्याउने वैधानिक बाटो राजनीतिक दलहरूले प्रँप्त गरेका छन्। फेरि एक वर्षा कति सरकार बन्ने, ककसले सत्तासुख प्राप्त गर्ने प्रतियोगिता सुरु हुनेछ। एक वर्षछि फेरि कुनै नौटड्ढी खडा गरेर, जनतालाई नै उचालेर आफनो माना भराउन राजनीतिक दलहरूले अर्को बखेडा खडा गर्नेछन्, वा लज्जा महसुस गरेर संविधान निर्माण गर्नेछन्, भनिहाल्ने अवस्था छैन। एकजना स्थानीय नेताजी थिए, उनी जहिले पनि आफना र्समर्थकहरूलाई भन्थे- तपाईंहरू यसो दबाबमूलक कार्य गर्नुस् न, अनि म फलानो समस्या समाधान गरिदिइहाल्छु। एकपटक उनका निकटतम मित्रले उनीसंग सोधेछन्- समस्या तपाईंलाई थाहा नै छ, समाधान पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने यो दबाबको नाटक किन गर्नुहुन्छ - उनले सुटुक्क भने- दबाब परेर समस्या समाधान गरिदियो भने जनताको मानिस हुं भन्ने सन्देश प्रवाहित हुन्छ। जेठ १४ गतेको अनावश्यक हल्ला फिंजाएर नेपालका वर्तमान राजनीतिक दलहरूले ँमियां की जुति मियां का सर’ भन्ने हिन्दी उखानलाई चरितार्थ पारेका छन्। जेठ १४ गते के के न विप्लव
गणतन्त्र दिवस औपचारिकतामा मात्र पूरा
प्रस, पर्सा, १५ जेठ/ तेस्रो गणतन्त्र दिवस आज वीरगंजमा पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइयो। जिल्ला विकास समिति पर्साले अन्तरक्रिया आयोजना गरेर गणतन्त्र दिवस मनाएको छ। निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी शेषरमण न्यौपानेको अध्यक्षतामा सम्पन्न अन्तरक्रियामा निमित्त प्रजिअ रामविलास यादव, प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, तमलोपा, संयुक्त, सद्भावना आदि दलका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। अन्तक्रिर्यामा नेपाल पत्रकार महासङ्घ पर्साका उपाध्यक्ष अशोक तिवारीले गणतन्त्र दिवसलाई औपचारिकता पूरा मात्र गर्ने गरी सरकारी निकायबाट मनाउने काम भएकोमा गुनासो गरेका थिए। उनले गणतन्त्र दिवस मनाउने दिन मात्र कार्यक्रम तय गर्नु अनि हतारमा खबर गरेर औपचारिकता पूरा गर्नुभन्दा बिर्सनु उपयुक्त हुने बताए। त्यस्तै काङ्ग्रेसका रामरूप कुर्मी, एमालेका अरविन्द सिंह, माओवादीका योगेन्द्र साहले पनि हतारमा औपचारिकता पूरा गर्नका लागि गरिएको गणतन्त्र दिवसबाट खासै उपलब्धि नहुने बताउंदै गणतन्त्रप्रति उदासीन नहुन आग्रह गरेका थिए। त्यस्तै अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीले ठाराब क्याम्पसमा मैनबत्ती प्रज्ज्वलित गरेर ग
रूखमा बस ठोक्किदा
प्रस, निजगढ, १५ जेठ/ जनकपुरबाट वीरगंजतर्फजांदै गरेको यात्रुवाहक बस रूखमा ठोक्किदा चालकसहित एकजना यात्रु गम्भीर घाइते भएका छन्। गम्भीर घाइते हुनेमा बस चालक बारा जीतपुर बसडिल्वाका ५५ वर्षीय बिगा चौधरी र यात्रु बारा इटियाही-७ का ४० वर्षीय रामेश्वर साह रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढले जनाएको छ। निजगढ-पथलैया सडकखण्डको १३ किलोमिटर नजिकै शनिवार राति ७ः४५ बजे ना. २ ख ४०४६ नम्बरको सूर्यलोक ट्राभल्स तीव्रगतिका कारण रूखमा ठोक्किएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बारा निजगढले जनाएको छ। बसको अगाडिको भाग रूखमा ठाक्किएपछि बसचालक चौधरीको दाहिने खुट्टा च्यापिएर गम्भीर घाइते भएका छन् भने बसको अगाडिको भाग क्ष्ँत्रि्रस्त छ। करिब ४५ मिनेटको अथक प्रयासबाट उनलाई उद्धार गरी उपचारको लागि वीरगंज लगिएको छ। ट्रकचालक, सहचालक, सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरीले उद्धार गरेका थिए।
सत्ता होइन सत्यको पक्ष्मा उभियौं
सत्य त्यही हो, जुन शुभ छ, कल्याणकारी छ, जसबाट जनहित हुन्छ । न्यायोचित भलाइका सबै कार्य सत्य हुन् । प्रत्येक व्यक्तिले सत्य र न्यायको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्छ। न्याय र सत्यको पक्ष लिने मानिस महामानव हुन्छ। अनेक महापुरुषहरूको जीवनमा अनेकौं कठिनाइहरू आए, तर उनीहरूले सत्यको पक्ष छाडेनन्। परिणाम के भयो, त्यो महत्त्वपूर्ण होइन। महत्त्वपूर्ण के हो भने उनीहरू कति बहादुरी र साहसका साथ सत्यको पक्षमा उभिइरहे। प्रत्येक कहानीको अन्त के होस् भने अन्ततः उसले जित्यो, ऊ आखिरसम्म सत्यको पक्ष्ँमा लडिरहयो। सत्यको पक्ष्ँमा संघर्ष गर्दै मानिसले मात्र जीवन बलिदान दिएको छैन, पशुपक्ष्ँीहरूले पनि यस सत्य-यज्ञमा आफनो आहुति दिएका छन्, जसको गाथा युग-युगसम्म जीवन्त रहने छ। पक्षी जटायुलाई रावणले अपहरण गरेको नारी को हुन् भन्ने थाहा थिएन, तर उसलाई के थाहा थियो भने रावण ऊभन्दा शक्तिशाली छ, ऊसंग तलबार पनि छ, यति कुरा थाहा पाउंदा-पाउंदै पनि ऊ रावणसंग भिडयो। पूर्ण शक्ति र सामर्थ्यले लडयो र अन्ततः घाइते भयो । सत्यको पक्षमा बलिदान दिनेले उपलब्धि पनि उच्चस्तरको प्राप्त गर्दछ। भगवान् राम आए, आफनो शिरको जटाले जटायुको
विभिन्न स्थानमा बुद्ध जयन्ती
प्रस, पर्सा, १३ जेठ/ २५५४ औं बुद्ध जयन्ती वीरगंजमा पनि परम्परागतरूपमा धुमधामका साथ मनाइएको छ । वीरगंज बौद्ध समितिको आयोजनामा गहवामाई मन्दिरबाट बाजागाजासहित र्‍याली नगरपरिक्रमा गरी बुद्धस्तुप भिस्वा चैत्यबिहार -भीस्वा डा“डा) मा पुगेर सम्पन्न भएको थियो। र्‍यालीमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, विद्यार्थी, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि, र्सवसाधारण, पत्रकारहरूको उपस्थिति थियो। बुद्ध जयन्तीको अवसरमा आज क्रिएटिभ ग्रुप, पर्साले आयोजना गरेको चित्रकला प्रतियोगितामा वीरगंजका ५ वटा विद्यालयका छात्रछात्राहरू सहभागिता भएका थिए। यसैगरी वीरगंज पानीटंकी-१० स्थित वीरगंज पब्लिक कलेज नजिक बुद्धको मूर्ति स्थापना गर्नका लागि शिलान्यास गरिएको छ। २५५४ औं बुद्ध जयन्तीको अवसरमा बौद्ध युवा क्लबको सक्रियातामा शिलान्यास गरिएको हो। वीरगंज बौद्ध समितिका अध्यक्ष वीरहर्ष शाक्यले सो शिलान्यास गरेका थिए। करिब ४ लाखको लागत बुद्धको मूर्ति स्थापना गरिने डा.दिपक शाक्यले बताए। हेटौंडा मकवानपुरमा बुद्ध जयन्तीका अवसरमा बौद्ध गुम्बाहरूमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिएका छन्। राङ्तोक पालरी गुम्बा हेटौंडा-१० बाट
रिलिफको १९ औं वार्षिक समारोह
समाजसेवामा योगदान दिनेहरू सम्मानित प्रस, वीरगंज, १३ जेठ/ वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष्ँ ओमप्रकाश सिकरियाले कुनै पनि समस्याको समाधान हिंसाको माध्यमबाट खोज्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अध्यक्ष्ँ सिकरियाले सभ्य समाज निर्माणका लागि हरेक समस्याको समाधान अहिंसाको माध्यमले खोज्नुपर्ने बताएका छन्। विभिन्न उत्पीडनबाट मुक्तिको नाममा जारी हिंसक गतिविधि समाज र लोकतन्त्रका लागि चुनौती भएको उल्लेख गर्दै सिकरियाले मुक्तिको नाममा जारी हिंसा जायज नहुने विचार प्रकट गरेका छन्। रिलिफ सोसाइटी अफ कमर्सद्वारा १९ औं स्थापना दिवस तथा बुद्धजयन्तीको अवसरमा आयोजित वाषिर्क समारोहलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्बोधन गर्दै सिकरियाले सो कुरा बताएका हुन्। रिलिफका अध्यक्ष्ँ बिहारीलाल लाठले सभाध्यक्ष्ँको आसनबाट स्वागत मन्तव्य प्रकट गर्दै भावनात्मक आवेगमा ठूला-ठूला आश्वासन दिनेहरू धेरै भए पनि करदाताहरूप्रति अन्य क्ष्ँेत्रको सकारात्मक दृष्टि नपाइएको गुनासो व्यक्त गरेका छन्। सो अवसरमा रिलिफको रिक्त रहेको महासचिव पदमा योगेन्द्रप्रसाद यादव र कार्य समिति सदस्यमा सुनीलकुमार खे
सीप सिकाउंदै सन्तुष्ट छिन् जानुका
प्रस, निजगढ, १३ जेठ/ हातको सीप निखार्दै, ग्रामीण भेगकी परिश्रमी, मेहनती महिला व्यवसायी केही वर्षेखि सदरमुकाममा व्यवसाय गर्दै आएकी छन्। आफूले सिकेको सीप उनले अन्य युवती तथा महिलाहरूलाईसमेत बांड्दै आएकी छन्। करिब १३ वर्षघि सिलाइकटाइ व्यवसाय गर्दै आएकी बारा मनहर्वा-७ की ३५ वषर्ीया जानुका भण्डारी विगत ४ वर्षेखि सदरमुकाम कलैयामा महिला आत्मनिर्भर सिलाइ प्रशिक्षण केन्द्र लेडिज टर्ेलर्स खोलेर ग्राहकको सेवा मात्र होइन अन्य युवती तथा महिलाहरूलाई सीपसमेत सिकाइरहेकी छन्। ग्राहकको कपडा सिलाइ गर्न भ्याई नभ्याई भएकी उनले सिलाइ प्रशिक्षण केन्द्रमा ३० जना युवती तथा महिलाहरूलाई पालैपालो कपडा सिलाइकटाइ प्रशिक्षण दिइरहेकी छन्। सित्तैमा सिकाउंदा सिक्नेहरूले त्यति ध्यान नदिने भएकोले प्रतिव्यक्ति मासिक तीन सय रुपियां लिने गरेको बताउंछिन्। सीप सिके परिश्रम गरेर घर्रखर्च धान्न सकिन्छ भन्ने मान्यता बोकेकी व्यवसायी भण्डारी मेहनती, परिश्रम त छंदैछिन् सन्तुष्ट पनि रहेको बताउंछिन्। माइतीमैं सिकेको यो सीपको विवाहपश्चात् व्यवसायीकरण गर्न सकेकीले उनी उदाहरणीय व्यवसायी तथा प्रशिक्षकको रूपमा चिनिंदै आएकी छिन
एक मात्र इमानदारिता
आचारसंहिता कुनै पेशा वा व्यवसायको मूल्य एवं मान्यताप्रति इमानदार रहनका लागि आफैंले बनाइने र लागू गरिने नीति हो। आचारसंहिता बनाएर केही हुंदैन, आचारसंहिताको पालना नगर्दा पनि केही हुंदैन यदि व्यक्तिमा इमानदारिता छैन भने। र एउटा पक्का कुरा के हो भने जुन समाजमा जति बढी नीति नियमहरू हुन्छन् त्यहां त्यति नै बढी नियमको अवहेलना हुन्छ। राज्यले नियम बनाएको हुन्छ, समाजको पनि आफनो नियम हुन्छ। राज्यको नियमको पालना गरिएन भने दण्डित हुनुपर्छ। समाजको नियमको पालना गरिएन भने राज्यभन्दा पनि गहिरो र प्रभावकारी दण्ड भोग्नुपर्छ। त्यसैले बरु राज्यको नियमको अवहेलना गर्नुपरे पनि मानिसले समाजको नियमको अवहेलना गर्ने आंट गर्न सक्दैन। त्यसैगरी प्रत्येक व्यवसाय, पेशाको आ-आफनो नियम हुन्छ, जसलाई आचारसंहिता भनिन्छ। यसको उल्लङ्घन गर्दा कुनै दण्ड खेप्नुपर्दैन। हो व्यक्ति आफैं आफनो दृष्टिमा र्झदछ। व्यक्तिमा चेतना छ, आत्मा छ भने त्यसले उसलाई सदैव धिक्कारिरहन्छ। र व्यक्तिलाई उसको आत्माले धिक्कार्नु नै दुनियांमा सबैभन्दा ठूलो दण्ड हो। व्यक्ति इमानदार छ भने उसका लागि कुनै आचारसंहिताको आवश्यकता पर्दैन। इमानदार हुनुको
-के- के शर्मा- ए. माओवादीले ६ दिनको आमहडताल फिर्ता लिएपछि विभिन्न कोणबाट जे-जस्ता टिका-टिप्पणी भए पनि त्यस आम हडतालमा माओवादी कार्यकर्ताद्वारा देखाइएको सभ्य, शालीन, शान्त र भद्र विशाल जनसागरको संयमता र अनुशासनले सबै पक्षबाट वाहवाही पाएकै हो। यद्यपि जनता अब आमहडतालको पक्षमा छैन भन्ने मनोभाव बुझेर होस् या विभिन्न क्षेत्रबाट परेको दबाबमा परेर होस्, माओवादी नेतृत्व वर्गले गरेको निर्णयबाट कार्यकर्ताहरूमा निराशा र आक्रोश हुनु स्वाभाविकै हो। तर माओवादी नेतृत्वले लिएको त्यो निर्णयले देशमा दूरगामी सकारात्मक सन्देश दिनेछ। आमहडताल फिर्ताको निर्णयले के देखाउंछ भने माओवादी जनताप्रति जिम्मेवार छ। शान्ति र संविधानप्रति मात्र नभएर ऊ आफूलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति रूपान्तरण गरिरहेको छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हुन् उसका पछिल्ला निर्णयहरू। १०/१० वर्षम्म जङगलमा बसेर जनयुद्ध सञ्चालन गरेको दलले तीन वर्षभत्र आफूलाई कति रूपान्तरण गरिसक्यो भन्ने तथ्य हिमाल खबर पत्रिकाले गरेको राष्ट्रिय र्सर्वेक्षण २०६७ बाट स्पष्ट हुन्छ। माओवादीहरू रूपान्तरित भएको देख्न नचाहने शक्तिहरू उसको उछित्तो काढेर उसलाई फे
पूजा भइन् पहिलो मिस टिन हेटौंडा
प्रस, हेटौंडा, १३ जेठ/ पहिलोपटक हेटौंडामा आयोजना गरिएको ओयसिस मिस टिन टयालेन्ट हन्ट २०१० को उपाधि पूजा श्रेष्ठले हात पारेकी छन्। हेटौंडाको ओम चलचित्र मन्दिरमा भएको फाइनल प्रतिस्पर्धामा ३९ प्रतिस्पर्धीलाई पछार्दै पूजाले मिस टिनको उपाधि हत्याएकी हुन्। भूत, वर्तमान र भविष्यलाई कसरी व्यख्या गर्नहुन्छ भन्ने निर्णायकको प्रश्नको सटिक जवाफ दिंदै पूजाले उपाधि हत्याएकी हुन्। निर्णायकको प्रश्नमा भूत बितिसकेको समय भएकोले केही फरक पार्दैन, वर्तमानलाई सुधार गर्दै भविष्य उज्ज्वल पार्नुपर्छ’ भन्ने जवाफ दिएर दर्शकको पर्र्रर्रर ताली पाएकी हेटौंडा स्कूल अफ म्यानेजमेन्टमा कक्षा ११ की विद्यार्थी पूजालाई उपाधिको हकदार घोषणा गरिएको थियो। प्रतियोगितामा मिस पर्फेन्ससहित बिन्जु महर्जन फस्ट रनरअप र मिस ब्युटिफूलसहित सन्दिपा अधिकारी सेकेन्ड रनरअप घोषित भए। उत्कृष्ट पांचमा पर्न सफलहरूलाई निर्णयकले लिखित प्रश्न गरेका थिए। प्रतियोगितामा उत्कृष्ट पांचमा पर्न सफल वेदिका गजुरेल बेस्ट स्माइल र मिस चार्मिङ पुनम चौधरी भए। प्रतियोगितामा मिस प|mेन्डली, अर्लिना श्रेष्ठ, मिस स्वीट र नेचुरल दीपिका शर्मा, मिस हेय
जीवनभरि चले बुद्धका वैज्ञानिक प्रयोग
भगवान् बुद्धको धर्मचक्र प्रवर्तनमा वैज्ञानिक अध्यात्मको अन्तर्धारा स्वतः प्रवाहित भइरहेको थियो। पछिल्लो केही समयदेखि उनी जेतवनमा थिए। महास्थविर रेवत, भिक्षु महाकाश्यप एवं भदन्त मौद्गल्यायन पनि त्यसताका त्यहीं उनीहरूका साथ थिए। आनन्दले त तथागतको सेवा गर्नु नै आफनो सम्पूर्ण कर्तव्य ठानेका थिए, त्यसैले उनी भगवान्का साथ रमण गर्दथे। तथागतको उपस्थिति जिज्ञासुहरूका लागि चुम्बकीय प्रकाश थियो। यो यस्तो अद्भूत समुज्ज्वल प्रकाश थियो, जसमा आकर्षा र सम्मोहन एकैसाथ मिसिएको थियो। यसको वशीभूत भएर थुप्रै जिज्ञासु नित्य बुद्धवाणीको अमृतपान गर्न आउँथे। तथागत पनि आफनो अनुदान-अवदानमा कुनै सङ्कोच गर्दैनथे। जो पनि जिज्ञासा लिएर आउँथ्यो, उनकाबीच उनी उदारतापूर्वक बोधिको प्रकाश वितरित गर्दथे। यो पाएर जिज्ञासुहरूलाई पनि अनौठो तृप्ति-तुष्टि एवं शान्ति प्राप्त हुन्थ्यो। तर नित्य आउने आगन्तुकहरूमध्ये जिज्ञासु मात्र हुँदैनथे, केही यस्ता पनि हुन्थ्ये, जो तथागतको तत्वज्ञानको परीक्षा लिन चाहन्थे। केहीको उद्देश्य उनीसँग शास्त्र-चर्चा गर्ने नाममा वाद-विवाद गर्नु हुन्थ्यो। केहीको रुचि धार्मिक रीति, मान्यता, परम्परा एवं क
वीरगंज विश्वविद्यालय स्वीकृति अन्तिम बिन्दुमा
प्रस, वीरगंज, १२ जेठ/ बहुप्रतीक्षति वीरगंज विश्वविद्यालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत भएको छ। विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि स्वीकृति पाउन प्रस्तावित विश्वविद्यालयका संयोजक डा. भगवानप्रसाद यादवले नेपाल सरकार समक्ष्ँ पेश गरेको प्रस्तावलाई आवश्यक अनुसन्धान एवं छानबिनपछि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो। परिषद्बाट स्वीकृत प्रस्तावलाई विधेयक समितिमा पठाइसकेको बिनाविभागीयमन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी गराएका छन्। विधेयक समितिबाट पारित भएपछि संसद्मा जाने र संसद्को बैठकले पारित गरेपछि वैधानिकता पाउने प्रावधान छ। प्रस्तावित वीरगंज विश्वविद्यालयले केही दिनभित्रै वैधानिक मान्यता पाउने मन्त्री कर्णले बताएका छन्। विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि पेश भएका झन्डै एक दर्जनवटा प्रस्तावहरू मध्ये जम्मा दर्ुइवटा प्रस्तावलाई मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ। वीरगंज विश्वविद्यालयसँगै मदन भण्डारी प्रतिष्ठानलाई पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको छ। विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार भइसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले खुशी तुल्याएको विश्वविद्यालयका संयोजक
नागरिकले खुसीको अनुभूति गर्नै नपाउने ?
-संजय साह- इतिहासको कठिनतम मोडमा पुगेर नेपाली नागरिकको मन अहिले निकै अमिलिएको छ। प्रसन्नचित्त एक अर्कालाई मृदु मुस्कान र्छर्दै उम·ले शुभकामना साटासाट गर्ने समयमा आम नेपाली नागरिक कुँडिएको मन लिएर मलिनो अनुहारले एक अर्कालाई हेरिरहेको छ। निराशाको अनन्त सागरमा डुबुल्की मारेको भाव सचेत नागरिकमा व्याप्त छ। कुहिरोमा हराएको कागजस्तो नेपाली राजनीतिको प्रमुख एजेन्डा हराएपछि कहिलेकाहीं रिसाएको बिरालोले खाँबो चिथोरेजस्तो नेपाली नागरिक अहिले आफैंलाई धारे हातले सरापेर सन्तुष्ट बन्न बाध्य छ। किन अहिले नेपाली नागरिक कतै आफनो अनुहार हेर्न पाइरहेको छैन। ऐना अगाडि उभिँदा आपै+mलाई अरूजस्तो देखिरहेको छ। कहीं कतै आफनो प्रतिविम्ब पाइरहेको छैन। आप\_mनै नारी छाम्दा अरूको हात समातेजस्तो अनुभूति भइरहेको छ। आफूभित्रै हराएकोजस्तो रुमलिरहेको आम नेपाली नागरिकले आफनो गल्ती खोजिरहेको छ। १२ वैशाख २०६३ का दिन काठमाडौंको टुडिखेलमा ऐतिहासिक सभामा सातदलले एकै साथ ँअब हामी मिल्छौ' भनेर गरेको बाचा जनताले बिर्सर्ेेे छैन। जनतालाई जन्तु ठानेर नेताहरू मनमौजी गर्न चाहिं पक्कै गएका होइनन्। जनतासामु ँमिलेर काम गर्र्छौं'
जो खरो त्यो झर्‍यो
माउ पार्टी ए. नेकपा माओवादीबाट उद्धिटिएरआफनो नेतृत्वमा नयाँ पार्टी बनाएका मातृका यादव व्यक्तिगतरूपले हक्की र खरो स्वभावका हुन्। त्यसैले जहाँ अरू राजनीतिक दलका नेताहरू मधेसी राजनीति र यसका नेतृत्वबारे कुरा गर्दछन्, कूटनीतिक शैली अख्तियार गर्दछन्, मातृका चाहिं मार्तोल हिर्काएझैं स्पष्ट शब्दमा उनीहरूको क्रियाकलापको विवेचना गर्दछन्। वीरगंजमा आयोजित जनसभापछि पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मातृका यादवले मधेसी नेताहरूको चरित्रबारे त्यस्तै विश्लेषण गरेका छन्। मधेसीवादी एकथरीका नेता सत्ताको अन्धो र घृणित दौडमा लागेर मधेसी हितलाई तिलाञ्जलि दिएका छन् तथा अर्काथरी मधेसी नेताहरू, अर्थात् भूमिगत सशस्त्र समूह चन्दा माग्नका लागि राजनीतिक पसल खोलेर बसेका छन्। यो उक्ति जति सत्य छ त्यति नै तीतो पनि छ। सरकारमा बसेका सबै मधेसी नेताहरूले मधेसीको हित भइरहेको देख्छन् भने सत्ताबाहिरकाले मधेसी जनतालाई निरन्तर व्रि्रोह र आन्दोलनका लागि उक्साइरहन्छन्। विभिन्न सोचसहित मधेसी मुक्तिका लागि यहाँ थुप्रै भूमिगत राजनीतिक समूह अस्तित्वमा देखिएका छन्। कोही मधेसलाई स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने आन्दोलन गरेको घोषणा गर्दछन् भने कोही म
मधेसी दल सत्ता र चन्दामा मात्र रमाइरहेका छन्
प्रस, पर्सा, ११ जेठ/ नेकपा माओवादीका संयोजक मातृका यादवले मधेसवादीदलहरू सत्ता र भूमिगत सङ्गठन चन्दा असुलीमा मात्र रमाइरहेको बताएका छन्। रिपोर्र्टर्स क्लब नेपाल पर्साद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक यादवले मधेस मुक्तिका नाममा आफूलाई भूमिगत भन्न रुचाउनेहरूले मधेसी र मधेसको हितमा भन्दा केवल चन्दा मागलाई प्राथमिकता दिएको बताए। उनले तर्राईमा सशस्त्र सङघर्क्ष चलाउने केही मात्र राजनीतिक सोचका भएका र उनीहरूसँग कार्यगत एकताका लागि वार्ता भइरहेको बताए। पार्टी अध्यक्ष मातृका यादवले जयकृष्ण गोइत, पवन समूहसँग वार्ता भइरहेको बताए। मातृकाले नेकपा माओवादी भूमिगत नहुने स्पष्ट पारे। हामी जङ्गल पस्दैनौं, आवश्यकता परे जनताको जङ्गलमा जानेछौं यादवले बताए । मातृकाले नेपाली गुप्तचरहरूले गलत सूचना प्रवाह गरी तलब खाइरहेको आरोप लगाए। उनले गुप्तचरहरूले पार्टीले हतियार सड्ढलन गरिरहेको रिर्पोट पठाएका भए पनि ती सब झूटा कुरा भएको बताए। गुप्तचरको मुख बन्द, आँखा-कान खुला हुनुपर्नेमा नेपाली गुप्तचरहरूको मुख खुला र आँखा-कान बन्द भएको तथा भ्रष्टहरूसँग भट्टीमा जाँड खाएर दिन बिताउने र गलत रिर्पोटिङ्ग ग
आरोपीलाई रिहा गराउन गाउँलेको दबाब
प्रस, कलैया, ११ जेठ/ प्रहरीले देवापुर टेटामा सोमवार राति हथियारसहित पक्राउ गरेको देवापुर- ८ निवासी वकिल यादव निर्दोक्ष रहेको जनाउँदै चार सय गाउँले यादवलाई रिहा गर्न दबाब दिन कलैया आएका छन्। टयाटरमा चढेर करिब १८ किलोमिटर टाढाबाट यादवलाई छोडाउन उनीहरू मङ्गलवार कलैया आएका हुन्। यादव निर्दोक्ष भएको र प्रहरीले उनलाई फसाउन खोजेको आरोप स्थानीय जगदीश रायले लगाए। खाना खाइरहेको बखत यादवलाई पक्राउ गरिएको गाउँलेको कथन छ। प्रहरीले यादवलाई एक थान नलकटुवा पेस्तोल, सोको एक राउन्ड गोलीसहित पक्राउ गरेको दाबी गरेको छ । यादवको घरबाट प्रहरीले बा २८ प ७०७९ नम्बरको मोटरसाइकल समेत बरामद गरेको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरीले यादवलाई अनुसन्धानको लागि हिरासतमा लिएको छ ।
व्यक्तिलाई आखिर कसले जन्माउँछ ?
- शंकरमान श्रेष्ठ सन् १९२९ इ. मा जर्मनीमा वाइभर संविधान तत्कालीन प|mेडरिक र्एर्क्टको सरकारले सहजरूपमा लागू भने गरेको अवश्य थिएन। सन् १९१८ इ. मा फेरडरिक र्एर्क्टले अस्थायी सरकार स्थापना गरेपश्चात् दुइ दलको विरोध मूलरूपमा सामना गर्नुपरेको थियो। एक राजसत्तावादी, जसले पुनः राजतन्त्र स्थापना गराउन चाहन्थे। दोस्रो साम्यवादी, जसले रूसी साम्यवादी व्यवस्था अनुरूप शासन लागू गर्न चाहन्थे। अस्थायी सरकारले प्रारम्भदेखि नै साम्यवादीको विरोधको सामना गर्‍यो। साम्यवादी नेता कार्ल लिबक्नेख्तले मजदुरलाई आफनो पक्षमा पारी सरकारविरुद्ध गृहयुद्ध सुरु गरे। तर र्एर्क्टले मध्यमवर्गका र्समर्थनबाट साम्यवादीको विरोधको सामना गर्न सफल भए। साम्यवादीपश्चात् राजतन्त्रवादीहरूले गणतन्त्र समाप्त पार्ने प्रयास गरे। सन् १९२० इ.मा डा. फाँन केपको नेतृत्वमा भएको उक्त प्रयासलाई र्एर्क्टले असफल पारे। उक्त पराजयपश्चात् पनि राजतन्त्रवादीहरूले गणतन्त्रविरुद्ध पाइला चाल्न पछि हटेनन्। सन् १९२३ इ. मा जनरल ल्युडेन्ड्रोपको नेतृत्वमा म्युनिखमा राजतन्त्रवदीहरूले गणतन्त्रविरुद्ध व्रि्रोह गरे। त्यस व्रि्रोहमा हिटलर पनि सरिक थिए। सरका
सबैमा दायित्वबोध हुनुपर्छ
खडेरी परेको बेला शीतल पानीको बाछिटाले मनलाई हर्षित तुल्याएझैं जीवनेश्वर जगतमोहन ट्रस्टको एउटा सानो कार्यक्रमले वीरगंजको पुरानो पुस्तालाई सुखद अनुभूति प्राप्त भएको छ। खाशगरी वीरगंजमा शिक्षा र शिक्षालय आरम्भ गर्ने भारतीय मनीक्षी जीवनेश्वर मिश्र र शिक्षाको जग बलियो बनाउन अहोरात्र समर्पित जगतमोहन अधिकारीको सम्झनालाई समकालीन पुस्ताले आज पनि समाजको धरोहर नै ठानेको छ। जीवनेश्वर मिश्र माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक थिए तर शिक्षा दान गर्नु मात्र उनको अभीष्ट थिएन, त्रिजुद्ध हाइस्कूल र नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ श्रीपुर साथै ठाकुर राम कलेजको स्थापना उनको शैक्षकि भावभूमिमा मात्र पल्लवित भएको थियो। जीवनेश्वर मिश्रले वीरगंजमा शिक्षाको जग बसाले भने त्यस जगमा निर्मित भवनमा बस्ने मानिसहरूस विद्यार्थी-शिक्षक, शैक्षकि कर्मचारीहरूमा संस्कारको बीजारोपण जगतमोहन अधिकारीले गरे। त्यसैले आज शिक्षालगायत समाजको हरेक क्षेत्रमा व्याप्त अराजकताका बावजुद वीरगंज शैक्षकि गतिविधिको केन्द्र बन्दै गइरहेको छ। जगतमोहन अधिकारीका समकालीन र उनका उत्तराधिकारी डा. मोहनप्रसाद लाखे जीवनेश्वर मिश्रको शिष्यसमेत रहेका व्यक्ति हु
टोली वास्तविकता नबुझी फर्क्यो
प्रस, निजगढ, १० जेठ/ रौतहट जिल्लाको वन क्षेत्रमा भएको हानि नोक्सानीको स्थलगत अनुगमन गर्न आएको व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन समितिको टोली हानि-नोक्सानी प्रभावित वन क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण एवं अवलोकन नगरी जिल्लाका केही स्थानमा मात्र नजर लगाउँदै कर्मचारी, सामुदायिक, सझोदारी वन समितिका पदाधिकारीहरूसँग अन्तर्क्रियागरेर फर्केको छ। टोलीमा सहभागी समितिका सदस्य रणध्वज कन्दङ्वा, कृष्ण यादव, ललिता साह सोमवार बिहान जिल्ला वन कार्यालय, रौतहटका कर्मचारीहरूसँग अन्तर्क्रियागरेर अत्यावश्यक काम परेको भन्दै काठमाडौं फर्केका छन् भने टोलीमैं सहभागी ए. नेकपा माओवादीका सभासद् धर्मराज विक र समितिका सचिव हरिशरण घिमिरेले जिल्लाको बेतौना, भवानीपुर, मैरा, चोचा, बलेरी गाउँ घुमेर फर्केका छन्। जिल्ला वन कार्यालय अर्न्तर्गत रहेको रङ्गपुर , बलेरी, जुडीबेला, स्रि्री, धन्सर, गैंडाटार रेन्जपोटमा काटिएका हरियो रूखको निरीक्षण नगर्राई वन अधिकृत राजबहादुर राउतले प्रमाण लुकाउन गाउँगाउँ मात्रै घुमाएपछि सरोकारवाला र स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित भएका छन्। रङ्गपुर रेन्जपोस्टको कोठियार र वनबो
सुरक्षा पोस्टमा प्रहरी बस्दैन
प्रकाश लम्साल, पथलैया १० जेठ/ ज­ङ्गलमा पर्ने राष्ट्रिय राजमार्गमा हुने चोरी-डकैती, अपहरण, लुटपाट रोक्न बनाएकोे सुरक्षा पोस्टमा प्रहरी बस्न छाडे पछि बाराको व्यस्त राजमार्ग असुरक्षित हुन पुगेको छ।। छ महिना अघिदेखि पोस्टमा प्रहरी बस्न छाडेपछि लुट र अपहरणका घटना दिउँसै हुँदा जिल्लाको राजमार्ग असुरक्षित हुन पुगेको हो। जङ्गलपोस्ट छाडेर सशस्त्र र जनपद प्रहरीले बजार र चोकमा सवारी साधन चेकजाँच गर्न थालेको छ। तीन महिना यता दुइ टि्रप फलामे छड, तीन मोटरसाइकल, एक व्यक्ति नगदसहित राजमार्गमा पर्ने जङ्गलबाटै अपहरणमा परेका र केही बटुवाहरू लुटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाराले जनाएको छ। जिल्लाका दर्जनभन्दा बढी सुरक्षा पोस्टहरूमा प्रहरी बस्न छाडेका छन् । जङ्गलको पोस्टमा प्रहरी नबसेकै कारण ना २ ख २६२९ नम्बरको ट्रक अपहरण गरी अमलेखगंजको जङ्गलबाट एघार टन फलामे छड लुटिएको थियो भने तेर्‍ह किलो जङ्गलबाट दिउँसो ना १३ प नम्बरको मोटरसाइकल लुटिएको छ। राजमार्गकै जङ्गलबाट दिउँसो तीन बजे निजगढ गाविसका सचिव आस महम्मद अंसारी मोटरसाइकल नगद रकम सहित अपहरणमा परेका थिए। त्यस्तै ना ४ ख २९
अन्तरिम संविधानको बौद्धिक विश्लेषण
- वीरेन्द्र यादव समान्यरूपमा संविधानवाद भनेको संविधानभन्दा माथि कोही पनि हुनुहुँदैन र संविधानको आशय र प्रावधान मुताबिक नै हरेक संयन्त्र सञ्चालित हुनर्ुपर्छ। मुलुकले अहिलेसम्म ६ वटा संविधानको अभ्यास गरे पनि सफल नहुनुमा संविधानवादकै अभाव प्रमुख कारण रहेको छ। यतिखेर अन्तरिम संविधानको व्याख्या, विश्लेषण र बुझाइको पृथकताले पनि संविधानवादको अभाव खट्किन थालेको छ। सरकारले आफ्नै हितमा व्याख्या गर्न थालेको छ भने प्रतिपक्षी दलले आफ्नै अनुकूल र बौद्धिक वर्गले पनि आफ्नै आस्था अनुसार व्याख्या, विश्लेषण गर्न थालेको देखिन्छ। संवैधानिक प्रावधानको वास्तविक मर्म अनुसार व्याख्या विश्लेषणको अभावले नै मुलुक जटिल परिस्थतिमा फस्दै गएको छ। सरकारले संविधानसभा नरहे पनि असाधारण अधिकारले सरकार सञ्चालन गर्ने दाबी गरेको छ। यसको मतलब संविधानसभा समाप्त भए पनि सरकार टिकिरहने बुझाइ सरकारको छ। सरकारको उत्पत्ति धारा ३८-२) अनुसार व्यवस्थापिका संसद्बाट भएको छ भने व्यवस्थापिका संसद्को हैसियत संविधानसभाले धारा ८३ अनुसार प्राप्त गरेको छ। धारा ८३ मा यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संविधानसभा कायम रहको
मिलीजुली बसौं बाँडीचुँडी खाउँ
नेपालीहरूलाई सीप नजानेको, अदक्ष आदि इत्यादि के-के भनिन्छ के-के। तर यसो नियालिहर्ेदा नेपालीहरूमा जति बुद्धि र विभिन्न समस्याहरूबाट निस्कन सक्ने जुक्ति छ त्यसको सही र सकारात्मक प्रयोग हुने हो भने नेपाललाई प्रगतिको पथमा लम्कन थोरै मात्र समय लाग्छ। समस्या के छ भने तमाम बुद्धि र सीप राष्ट्र र समाजलाई अधोनतितिर डोर्‍याएर व्यक्ति आफू उन्नतितिर लाग्ने जमर्को गर्दछ। भर्खरै बारा जिल्लाको एउटा घटना प्रकाशमा आयो। सरकारले शिक्ष्ँामा आँखा चिम्लेर पैसा खन्याइरहेको बेला बगिरहेको गङ्गामा हात धुने बुद्धि कसरी एउटा सामान्य व्यक्तिले झिक्यो र बाँडीचुँडी खाने सीप विकसित गर्‍यो सुन्दा अचम्म लाग्छ। पञ्चायतकालमा एउटा नारा जनज्रि्रोमैं बसेको थियो- मिलीजुली बसौं, बाँडीचुँडी खाउँ। अर्थात् देशका जति बाठाहरू छन्, कुनै विवाद गरी सँगै बसौं र राष्ट्रको सम्पत्ति आपसमा गच्छेअनुसार बाँडेर खाउँ। हुन त पञ्चायतकालमा यो कुरा उपल्लो तहका व्यक्तिहरूमा मात्र लागू थियो, तर अहिले देशमा गणतन्त्र आइसकेको हुनाले सामान्य जनतामा समेत विकसित भएको छ। शर्त एउटै छ, व्यक्ति बाठो हुनुपर्छ,बुद्धि खियाउनमा पारङ्गत हुनुपर्छ। सरकारले
भीडको तालमा नाच्ने नेताहरू
अहिलेको समय नेपालमा र्सार्वजनिक हित गौण र व्यक्तिगत हित प्रखर भएको छ। लोकतन्त्रको नाममा यति राजनीतिक दलहरू खुलेका छन्, तीमध्ये केही त प्राविधिक तारतम्य मिलाएर मात्र अस्तित्वमा छन्। अनि उनका लागि कुनै राजनीतिक वाद वा सिद्धान्त केही रहंदैन मात्र व्यक्तिगत स्वार्थपर्ूर्ति उनको ध्येय बन्न जान्छ। यस मामिलामा साना-ठूला दुवै पार्टीहरूसंग यही समस्या रहेको छ। कसैले र्सार्वजनिक हितविरुद्ध व्यक्तिगत स्वार्थ पर्ूर्ति गर्न लागेको देखेर पनि तैं चुप मैं चुपको स्थिति देखा पर्दछ। विरोध गर्ने साहस शीर्ष नेताहरूमा पनि हुंदैन। कारण कार्यकर्ताको मनोमानीमा अलिकति पनि हस्तक्षेप गर्‍यो कि ऊ भ्यागुताजस्तै उप|mेर अर्को पार्टीतिर लाग्छ। जुन पार्टीमा उसको प्रवेश हुन्छ उसले पनि त्यस व्यक्तिलाई माउ पार्टीले किन कारबाई गर्‍यो, अनुशासनहीन काम गरेको थियो भने यहां पनि त्यस्तै होला र पार्टीको छवि बिग्रिएला भन्ने चिन्ता गर्दैन। अनि त्यही कार्यकर्ता घरी यता घरी उता गरिरहन्छ। सांझ एउटा पार्टीको सदस्य भएको हुन्छ भने बिहान अर्कै पार्टीको। यसरी प्रत्येक पार्टीमा स्वार्थी जमातको चलखेल बढेको छ र र्सार्वजनिक हित ओझेलमा परेको
सहमति र सहकार्यको खांचो
जितेन्द्र शर्मा संविधानसभाबाट जेठ १४ भित्र संविधान निर्माण हुन नसक्ने प्रायः निश्चित भइसकेको छ। संविधान समय सीमा दुइ साता पनि बांकी नरहेको तथा संविधान निर्माण सम्बन्धी कतिपय महत्वपूर्ण विषय निर्ण्र्ााहुन अझै बांकी रहेको अवस्थामा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा संशोधन गरी संविधान सभाको म्याद बढाउनुको विकल्प छैन। यद्यपि तत्कालका लागि समस्या समाधानको यो एक मात्र उपयुक्त विकल्प हुन सक्दछ तर नयां संविधानप्रति तथा संविधानसभाप्रति आम नेपाली जनताको त्यति बढी उत्साह, विश्वास र र्समर्थन नरहने निश्चित छ। जनान्दोलन-२ को सफलतापश्चात् आन्दोलनकारी सात दल र माओवादीले मिलेर जानुपर्नेमा आ-आफनो दलीय स्वार्थका कारण यी दलहरू देश र जनताप्रति गम्भीर र जिम्मेवार बन्न सकेनन्। नेपालको अन्तरिम संविधान सबैको सहमतिको दस्तावेज हुनुपर्नेमा विरोधाभास, असहमति र समस्याको पोको बन्न पुग्यो। संविधानको प्रस्तावनामैं सहमति हुन नसकेको कारण अन्तरिम संविधान सुरुदेखि नै विवादमा रहिआएको छ। जाबो ४ महिनामा बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बिना कुनै संशोधन १५ वर्षसम्म चल्यो तर अग्रगामी र क्रान्तिकारी मानिएको अन्तरिम सं